China Granite igwe components emepụta na suppliers | Bocheng Co-ihe okike
Nkenke Granite Base
Anyị na-enye granite mmiri maka ụdị igwe dị iche iche, dịka igwe CNC na akụrụngwa akụrụngwa laser, akụrụngwa dị elu granite cmm, isi akụrụngwa maka igwe eji egwu mmiri, Granite Railways, Granite guideways Ogologo oghere nke z axis, Granite Precision Apparatus Component maka osise Machines, Granite Air Iburu. Anyị nwere ike ime ụdị ọ bụla, ọ bụrụ na ịnwe eserese.
Granite bụ nhọrọ a na-ewu ewu n'ihi ike ya na ịma mma ya. Granite na-ewu ewu n'ihi nguzogide ya na-ekpo ọkụ, ọkọ, na stains. Site na nlekọta na nlekọta kwesịrị ekwesị, granite nwere ike ịdịru iri ise tinyere ọtụtụ afọ ma kwesiri itinye ego ahụ.
0ur black granite ji atụ ngwaọrụ na granite n'ibu mmiri nwere nke dị elu Jinan Black granite. N'ihi oke nkenke ha, ogologo oge, nkwụsi ike dị mma na nguzogide corrosion, ha ejirila ya mee ihe na nyocha ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na mpaghara sayensị dị ka igwe alaerospace na nyocha sayensị.
anyị Granite ji atụ ngwaọrụ nwere ndị na-esonụ e ji mara:
1 Ezi nkenke kwesiri ntukwasi obi na-eguzogide nrụrụ na nkwa ziri ezi n'okpuru ọnọdụ ikuku dị mma
2 No-ajari na anticorrosion.
3 Yiri eguzogide ogologo ọrụ ndụ.
4 Mbelata ọ bụla ma ọ bụ ịkpụchapu maka ịrụ ọrụ n’elu ala anaghị eweta akụrụngwa nke nwere ike imetụta etu ọ dị.
5 Non magnetization. Ngwaọrụ Igwe
6 Mgbawa mara mma na-enweghị umengwụ mgbe ngwa ọrụ ya ma ọ bụ ngwaọrụ ya na-agagharị na ya.
Akụkụ CNC nke granite, gụnyere isi, kọlụm, ụdọ na ụzọ ụgbọ oloko, nke kachasị nke 6000x3500x600mm.
Nke gara aga: konkiri atụ ngwaọrụ
Osote: konkiri n’elu ala